I-Semalt Expert Talking About Types Backlinks
Intanethi ibonisa iqela lemisebenzi emininzi. Kwimeko ye-e-yorhwebo, umntu unokukwazi ukwenza ezininzi imisebenzi yokuthengisa yedijithali kwiwebhusayithi yazo. Uninzi lwabaphathi bewebhu baxhomekeke kwizakhono zokuthengisa zedijithali ezifana nokuthengiswa kokuqukethwe kunye nokuThengiswa kweMidiya yeNtlalo (SMM). Njengoko abantu baqhubeka nokuqhuba imisebenzi yabo yokuthengisa, abantu bahlala bephila kwimida yabo yokugcina iiwebhusayithi zabo zihlala.
Ukuphuculwa kweeInjini zoKhenketho ( I-SEO ) yinkqubo yokuthengisa yedijithali encike ekubekeni indawo kwiwebhusayithi zokukhangela izipho ezithile. I-SEO isebenzisa iindlela zokuthengisa zedijithali ezifana nezinto eziphambili zophando, ukudala imixholo kunye nokuxhaswa kwe-backlinking. Ukubuyiswa kwe-backlinking yindlela esebenzayo ye-SEO enokuba luncedo kakhulu. Xa wenza i-SEO kwinkampani yakho, kubalulekile ukwazi iintlobo ezahlukeneyo ze-backlinks ezikhoyo kuyo nayiphi na intengiso ye-intanethi.
Ezinye zeentlobo ze-backlink zikho kwesi sikhokelo esinikezwa nguMphathi weNtengiso kuMthengi Semalt , uMil Bell:
Hayi ulandele uze ulandele i-backlink
Ngamanye amaxesha, unokuba ufuna ukufumana i-backlink kwiwebhusayithi okanye kwisizinda usebenzisa umtya wecingo olula..Kule meko, impawu "rel" kuGoogle inokumisela uhlobo lwe-backlink oyisebenzisayo kwiwebhusayithi yakho. Yenza-landela iinqonkco zinokuncedisa isikhundla sakho kwisayithi kwi-Google injini yokukhangela ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, unokuba nemiba ethile ngexesha usebenzisa ezinye izilwanyana, ngokukodwa kwiGoogle. Ezi zintlanzi zifumana inzuzo yazo kwi-algorithm yezinye iinjongo zokukhangela ezifana neBing okanye i-Yahoo.
Izixhumanisi zendalo kunye ne-SEO
Xa wenza i-SEO, kukulungile ukuqwalasela umthombo wezonxibelelwano. Uqhagamshelwano lwezendalo yizo ezivela kwimithombo esemthethweni. I-Backlink inokunika iwebhusayithi yakho imithombo efanelekileyo yendlela kunye nokwenza ukuba isiza sifumane inzuzo ehlekileyo kwiinjini zokukhangela. Izixhumanisi ze-SEO ezingaqhelekanga zingenza isayithi ifumane izigwebo eziqinileyo zekhonsole yosesho. Ezi ngqungquthela zivela kwi i-arhente emnyama ye-SEO i-arhente ethembisa ukuhlawula i-backlinks ukubeka isayithi ngokukhawuleza. Gwema izixhumanisi ezinjalo kuba zikhokelela ekugqibeleni isayithi lakho kwiSERPs.
Izihlandlo zobomi okanye eziqeshisiweyo
Umthombo we-backlink uhlala ubalulekile. Iziqhagamshelwano ezisemthethweni zinikezela ithuba lokufumana ngaphezulu, okwenza ubomi bufumaneke kwi-backlinks. Le ngongoma ngumbono oshishino oluyimpumelelo ekusebenziseni ukuphumelela. Amanqaku aqeshisiweyo avela kwimithombo efana nezikhonkco ezihlawulwe. Ezi zintlanzi zihlala kuzo zonke ezinye izixhumanisi ezinomthombo oqhelekileyo, izikhundla ze-spam ezibhekiselele kuzo. Ziyakwazi ukuba yintengiso yezithuthi ezingenzi naluphi na ukuthengiswa.
Ukuphuculwa kweeNjini zoPhando kuyindlela ebalulekileyo yokwenza imisebenzi ye-intanethi. Ngokomzekelo, i-SEO ivumela abantu ukuba babe nemithombo emininzi yabaxhasi be-intanethi kunye nokufumana ezinye iindwendwe kwiinkalo ezininzi kwiwebhu. I-SEO ivela ngeendlela ezininzi kunye neenkqubo. Kukho nawuphi na umsebenzi we-SEO, i-backlink yinto yokuhlangana kwansuku zonke abaphathi bewebhu abangayifumana kwizicwangciso zabo zokuthengisa nge-intanethi Source . Ngaphakathi